Nezinwele kuyinqubo engokwemvelo ukuthi sici komzimba womuntu. Nokho, kungenzeka ukuthi ukhuluma kuphela esimweni lapho usuku ingena phakathi 10 no-100 izinwele. Kodwa kukhona yokuthi inani lawo likhuphuka izikhathi eziningana.
Khona-ke omunye izaziso elahlekile izinwele zabo kuyo yonke indawo, ngisho komqamelo ngemva kokulala ngokwanele ebusuku. Lokhu isimo curls kudinga isinyathelo ngokushesha esiphuthumayo.
Ngokuvamile le nkinga nezinwele kwenzeka abantu ngenxa yezifo ezihlukahlukene. Kungaba ipheshana zokugula emathunjini bese yegilo indlala, isifo sikashukela, kwehle elithwala umoya-mpilo, kanye ukungalingani hormone. Zonke lezi zifo sikhuthaze iqothukile. Kulokhu, ukuxazulula inkinga kunconywa ukuqeda ivelaphi, okungukuthi ukwelapha lesi sifo.
Ngezinye izikhathi zibizwa ngokuthi Ukulahlekelwa Shag nezimbangela zangaphandle. Lezi zihlanganisa abampofu isimo kwemvelo kanye izinwele ukunakekelwa okungalungile. Okufanele ukwenze kuleli cala? Ukuze kuxazululwe le nkinga, okokuqala kunakho konke, kudinga ukunakekelwa ngokucophelela sivala, okubandakanya ukusetshenziswa kokubili izidingongqangi kazwelonke kanye buso othengiwe amashampu.
Izindlela ukulungisa inkinga
Ngokuvamile amadoda nabesifazane, kokubona izinwele esisele bunch ikamu awela isidumo yangempela. Musa nje aphathe inkinga yabonakala. Phela, omunye izimbangela kwabantu ekhona izingidi nje ukucindezeleka.
Ngezinye izikhathi lesi simo sibangelwa hhayi ningi than esikhashana. Ngokuvamile naye olutholwa abesifazane ngesikhathi sokukhulelwa futhi emva ukuzalwa komntwana eminyakeni yokuqala. Kodwa ukuthi kungase kube yiqiniso, ukuvela inkinga kufanele aphathwe ngomoya ophansi futhi afune wonke engcono izindlela kungenzeka ukulungisa inkinga. I elula kunazo zonke izindlela akhona impandla kuyinto ukusetshenziswa imoto ekhethekile. Kuyinto elula ukusebenzisa futhi ikuvumela ukuba uthole umphumelo oyifunayo. Kuqinisa izinwele follicle futhi izinwele asanda kuluthola ubukhazikhazi kanye kwabantu. Kodwa ukuze sifinyelele umphumela oyifunayo, ngamunye wethu ufuna ukwazi ukuthi imoto ngokumelene nezinwele kangcono.
Ukuze sithole imoto kangcono nezinwele, ukubuyekezwa zalabo abaye babhekana nale nkinga kudingeka uqinisekise ukuthi ufunda. Nokho, lokhu akwanele. Iqiniso ukuthi umuntu ngamunye uhlobo ayo izinwele. Ngaphezu kwalokho, izikhonzi zokugula, kungenzeka kakhulu sihluke nomunye.
Pho-ke, ukuba bazinqumele le imoto kangcono nezinwele? ochwepheshe lezivakashi kuyoba usizo olukhulu kule ndaba. Kulesi sisekelo, ungenza uhlu imithombo, ukusetshenziswa okuyinto uzokunika umphumela kulindeleke. Labo abafuna kahle siqonde impikiswano ukukhetha imoto yezokwelapha, odinga ukukwazi mayelana ingxenye engcono kakhulu-ke, okuyoholela ushintsho oluhle futhi bayeke inqubo balding.
Ngenxa yokuthi isizathu esiyinhloko ukulahlekelwa kwabantu curls kuyinto nobuthakathaka uhlelo lwabo izimpande, kubalulekile ukuba bathole izimali, ekwazi kuthinte follicle futhi ubaqinise kanjani. Ngokuvamile, nezinwele kwenzeka ngenxa yokuntuleka emzimbeni izakhi ezibalulekile. Ngakho-ke, amavithamini namaminerali futhi kufanele kufakwe ekwakhiweni izimali kuluthola.
Yini izingxenye kufanele libe imoto kangcono nezinwele? ochwepheshe lezivakashi ukweluleka ukuthola izimali njengengxenye lapho kukhona:
- amafutha abalulekile, imifino, amakhambi utshani;
- izingxenye okumbiwa phansi;
- izakhi, amafutha izinwele.
Kodwa lokhu kunganele. Ukusebenza futhi ephephile kube imoto kangcono nezinwele. ochwepheshe lezivakashi ukuncoma unaka le insipho Amineksilom. Sinenkosi izakhiwo okuzivuselela, okuhloswe ngaso ekubuyiseleni isakhiwo zinyakaze futhi baqinise follicle. Abanye ochwepheshe batusa ukusetshenziswa abicah amashampu. Bona lisibekele izinwele, ebavikela wethonya elonakalisayo imvelo. inhlanganiso Ngempumelelo ekhanda izinwele ayavela bessulfaty imoto. Isisekelo ejenti enjalo yizici zemvelo iqhaza ekuqiniseni uhlelo impande.
Technique inqubo yezokwelapha ukubuyisela ukuminyana izingidi, ayinazo izimfihlo. imoto ekhethekile ekhanda kufanele ifakelwe ngaphambi ukugeza. Ukwakheka kumele elifakwe kahle futhi isikhumba nezinwele. Hashaza off kusho akumelwe ngokushesha. Kungakapheli nemizuzu embalwa kumele zibe nomthelela ekhanda. Hashaza Shampoo kudingeka vodichkoj lokushisa ukhululekile - futhi kushisa noma kubanda.
Kubalulekile nokukhumbula ukuthi akudingekile ukuba ulinde imiphumela ngokushesha, ngisho noma uma benza khona khona bese usebenzisa imoto kuhle nezinwele.
Uphenyo amadoda nabesifazane abaningi baye babonisa ukuthi ngesikhathi esifushane akunakwenzeka ukuxazulula le nkinga. Laba basizi isinyathelo kancane futhi imiphumela ingabonakali kungabonwa kuphela ngemva emithathu kuya kwemine amasonto emva Ukuqalwa yokwelashwa. Futhi ngaleso sikhathi, ngokushesha avele izinguquko kuphela omuhle kule nokwakheka curls, futhi ngemva kokuba eqalé inqubo nokuwaqinisa, ekuqedeni impandla.
Kwimakethe ziningi imikhiqizo yezimonyo amathuluzi yakhelwe ukuqeda impandla. Uyini imoto kangcono nezinwele? Omunye ezokwenza ukukhiqiza nomphumela ofiselekayo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi imikhiqizo kuphela ezivezwa amafemu abamagama ezindebeni wonke umuntu, futhi ube imoto kangcono nezinwele. Lobuya abasebenzisi kanye nochwepheshe uqinisekise ukuthi ukuzuza izimpahla inkampani owaziwa, uthola yi omkhulu, futhi ngeke yonakale ekukhetheni cishe. Cabanga uhlu amakhambi ephumelela kunazo nobumpandla.
Mayelana nalesi inkampani kusho ukunakekela kwabantu curls, manje uyazi cishe njalo umthengi. Yingakho ohlwini "Top amashampu ngokumelene nezinwele" isilinganiso iqala kubo.
Inkampani "naseVichy" liyaziwa ukuthuthukiswa yayo ye-mbono sika Skin Care. Uveza kanye imoto kangcono nezinwele. ochwepheshe lezivakashi omuhle njani umphumela lezi zimali nokuphathelene. Ukusebenzisa izinkampani imoto medicated abakwazi kuphela ukubambezela yonke inqubo nezinwele, kodwa futhi ukuba abanike ukubukeka shiny futhi unempilo.
Ngokwesibonelo, ithuluzi ezifana "naseVichy Dercos", - a imoto kuhle nezinwele. ochwepheshe lezivakashi ukumdumisa okusezingeni eliphezulu ngenxa khona lichaza ekwakheni aminexil ukuhlinzeka ekunqanyulweni balding inqubo. La ma-molecule lokhu ingxenye baqinise kushaft uboya follicle, ukuthi, eqinisa izimpande. Siyini leso simiso lomcebo okuvalelwe Aminexil? molecule wayo kubuyise umsungulo collagen abakhona emisipheni eduze follicle. Lokhu kuvumela unwele ngalunye ukuba nokunwebeka kanye nezimo ngazo ophumayo yayo kusukela ama.
Ukuze abasebenzisi eziningi, "naseVichy Dercos" - lena imoto kangcono nezinwele. Izimpendulo ezivela kulabo kakade isicelo leli thuluzi, inkulumo mayelana nokusebenza ngendlela okusezingeni eliphezulu kuyi-ukubuya nezinwele ezinde ezilimele ukubukeka yobuhle. Lo mphumela alichaza imoto ngezithako zawo ezinkulu, equkethe nicotinic futhi pantothenic acid, futhi pyridoxine. Inhlanganisela yalawo amavithamini ngesivinini ukukhishwa isakhiwo izinwele phezu obuphelele wonke, okuyinto kunciphisa ukulahlekelwa ivolumu. Ngaphezu kwalokho, lezi zingxenye asebenzayo we imoto kuthuthukisa kwegazi kwesikhumba ekhanda. Lokhu kusiza ekucebiseni izinwele follicle izakhi ebuyisela nezinwele ezinde enempilo.
Ochwepheshe batusa ukusebenzisa imoto "naseVichy" ukukhanya ukubhucungwa ngenxa nesigamu kuya imizuzu emibili. Kuphela kuleli cala kwesikhumba ekhanda futhi izinwele uzobe ngokwanele ukuba afuthwe ngesibulali-ejenti zokwelapha. Shampoo "naseVichy DERCOS" foams okukhulu. Le mpahla kuyivumela iphume ikhanda lakhe kusukela okokuqala ngaphandle kokwenza ukuzihlikihla okuphindaphindiwe. Lena omkhulu inzuzo izindlela. It kungokwalabo esigabeni okunethezeka. Ngakho, ibhodlela elincane imoto naseVichy Dercos 200 ml inenani ka-ruble 500. Nokho, kuthiwani uma inkinga ekhona kufanele engawayekanga imali ukuze iyithenge. Phela, ngokubona abasebenzisi eziningi, "naseVichy Dercos" - lo imoto kangcono nezinwele. Umthelela wokutholwa esiyitholayo emva ukusetshenziswa ezintathu. Abesilisa nabesifazane asebeneminyaka uqaphela ukuthi izinwele zabo kunamandla, ayesebenza ethambile, ziwa ngamanani amancane.
Nokho, ochwepheshe baxwayisa ngokuthi i- "naseVichy" amashampu zingamathuluzi okhokhelwayo. Yingakho, ukuzisebenzisa esikhathini ukwelashwa ekhaya, ufuna ukufeza izinqubo ngendlela efanele. Ngakho, akufanele zisetshenziswe phezu izinwele imoto kakhulu, futhi ukukwenza izinwele owomile. Kungenjalo aminexil ngeke ibe nomphumela ongemuhle izinwele zakho.
Kuze kube manje, emakethe ye lakithi kabanzi imikhiqizo afakiwe "vertex" lenkampani Russian. imiklamo balo bathanda imithi yakhelwe ukuqeda inqubo nezinwele kubangelwa izinkinga dermatological. Ngaphezu kwalokho, inkampani ukhiqiza namathuluzi kwabesifazane nabesilisa. Ngokuphathelene amashampu zokwelapha ladies emihle, zenziwa izinhlobo ezimbili:
- I-izinwele evamile futhi ephelelwe amanzi emzimbeni;
- I-inhlanganisela kanye nezinwele ezinde oily.
Eqenjini lokuqala kukhona amashampu abakhona lichaza ekwakheni zingxenye ezilandelayo:
1. Amafutha poppy. It kuthuthukisa izinwele-fatty acid, kuvimbela kwesigaba ithiphu aqede dandruff futhi kwenza izinwele esithambile futhi shiny.
2. Lecithin. Le into isebenza umswakama izinwele nokubuyisela isakhiwo sabo.
3. Pantothenic acid. Le ngxenye sikhula izinwele normalizes lipid umzimba esikhumbeni, kuthuthukisa ukukhula futhi inikeza inqaba zinyakaze. Uma ingxenye izindlela kuyinto lamavithamini, kuba imoto enhle kakhulu nezinwele kwabesifazane, ngoba ngaphezu ekuthuthukiseni Sakhiwo sangekhatsi ke inamathela imicu kukhanyise, umsungulo nevolumu.
4. Tea Tree Amafutha. Le ngxenye disinfects iphinde ivimbele amanzi emzimbeni we isikhumba sasekhanda nezinwele.
5. hoods burdock kanye izimbabazane. Lezi zingxenye zakhelwe ukuthuthukisa curls saturation, ephulukisa izakhamzimba.
Iqembu imoto wezokwelapha kusukela inkampani "vertex" ngaphezu uwoyela poppy imbewu yesibili iqukethe izinto ezikhishwe esikweyoku, usika izingcezu azidingayo ngokucophelela futhi esikweyoku. Konke lokhu izakhi ahlinzeke ukuzinza okuqukethwe alkalis futhi acid, aqede dandruff kanye seborrhea nobumpandla kumisiwe.
Shampoo ithengiswe ngaphansi kwegama lomkhiqizo "Alerana" okungabizi. Ngakho, izindleko ivolumu umfuma 250 ml luphakathi ruble 300.
abasebenzisi Abaningi bakwazisa lokhu brand "Seletsin", ukukhiqizwa kwanoma esemgwaqweni eGibhithe. Le nkampani inikeza i "Alcoy" imoto nobumpandla zihlanganisa izidakamizwa namanxusa bioactive. Yini eyenza ukusetshenziswa mathuluzi?
Ngo isicelo yayo kwandisa ngibone umjikelezo wokuphila kwe izinwele nezimpande zawo phansi. Konke lokhu kuvumela ingxenye enkulu ye imoto, okubandakanya:
1. Biotin. Lokhu B7 Vitamin, ohilelekile zonke izinqubo ezibalulekile zomzimba.
3. hydrolyzate kuyi-collagen. Le ngxenye kwenza web izinwele okuhlala isikhathi eside.
4. Extracts of sembabazane kanye burdock. Iyadingeka Ukuze kangcono kwegazi izimpande.
5. Caffeine. Le nto kalula lingena ekhanda futhi ubamba umswakama khona.
Futhi, i-caffeine - kulethe enamandla okukhuthaza izinwele zikhula zibheke ngakhona. Nokho, iningi asebenzayo ingxenye "Seletsin" imoto kuyinto Anageline. Ngokokuqala ngqá ukusetshenziswa aso eqala kulezo amalungiselelo, ayehloselwe uqinise izinwele. Kuyini lokhu Izinto? akhiphe Anageline ekhiqizwa ngesisekelo lupin emhlophe. Uma sibheka ukwakheka kwazo kwakhona:
- izakhi mkhondo;
Ukunikeza nobumbano, lezi zingxenye ukunweba imikhumbi futhi bathuthukise microcirculation. Ngenxa zonke lezi zinqubo, izakhi zingene ngokugcwele nangokwengeziwe ukuhlupheka follicle. Ngenxa yalokho zokukhula yanda futhi curls wanda phakathi umjikeleto wemphilo yabo.
Uma ungazi ukuthi iyini le imoto kangcono nezinwele, ukuthenga "Seletsin". Ingasetshenziselwa hhayi kuphela e wezokwelapha kodwa futhi njengoba isilinganiso izifo. Kuyamjabulisa futhi eziphansi kwaleli thuluzi ngempumelelo. Ngakho, ngentengo eyodwa flakchika ivolumu 200 ml luphakathi ruble 300.
Yini imoto ihamba phambili nezinwele? Umsebenzisi Izibuyekezo sidumisa futhi izindlela ezifana "Fitoval". Lo muthi ukwelashwa wadala ezihilela osokhemisi kanye odokotela, sifaka iqoqo asebenzayo izinto zemvelo kanye zamakhemikhali. Isigaba sokuqala sihlanganisa:
- kakolweni peptides, ekuvuseleleni izinwele isakhiwo;
- ezikhishwe of arnica nerosemary kuthuthukisa igazi flow ekhanda;
- glycogen kokwenza ukukhula Activator umsebenzi.
Kusukela chemical compounds medicated imoto lolucuketse:
- chloride kanye sodium hydroxide;
- flavour nezinye izingxube zamakhemikhali.
Izimpendulo ezivela abathengi, lokhu imoto has iphunga elimnandi. Ngaphezu kwalokho, kahle kuqinisa izimpande izinwele, futhi ahlanze ukungcola kusukela ekhanda futhi izinwele. Amalungu wazi futhi ukuthi, naphezu ezinye zamakhemikhali, imoto akubangi komzimba. Leli thuluzi angathengwa at ekhemisi ngentengo okungabizi. Ngakho, izindleko ivolumu umfuma 100 ml RUB 180 kanye 200 ml - ruble 250.
Kuthiwani uma eziningi izinwele liphuma? Amacebo eziwusizo
Ukulahlekelwa izinwele Kwabesifazane: What To Do?
Kungakanani silahlekelwa izinwele nsuku zonke?
Kangakanani ekwelapheni eczema ngezinyawo zakhe
Umgadli Belgian Gianni Bruno
Lo mdlalo "League of Legends" - umhlahlandlela. UCassiopeia: ubukghoni nokubhalelwa.
Indlela ukuhlukanisa nekatshana ocansini? Thola impendulo yalo mbuzo othakazelisayo!
Kalina ingcindezi: imithi iresiphi
Carbohydrate ayinkimbinkimbi futhi ilula: lokho kungcono imizimba yethu